रोचक Archives - Halesi News
५ बर्ष पछी मिल्दै छ यी ४ राशिलाई जिवनभर कहिले मिल्न नसक्ने सफलता ज्योतिष शास्त्रको अनुसार एक व्यक्तिमा राहु-केतुको नराम्रो प्रभाव रहेको अवस्थामा जोर्नी दुख्ने, सन्तान प्राप्तिमा रुकावट आउने, घटना-दुर्घटना बढ्ने, आर्थिक समस्या बढेर जाने आदि हुने गर्छ। ज्योतिष शास्त्रीहरुको अनुसार केहि समयमानै केहि राशिमा भएको राहु-केतुको नराम्रो प्रभाव घटेर जानेछ। जसको कारण निम्न उल्लेखित राशिहरुको जीवनमा ठूलै परिवर्तन आउनेछ। कर्कट राशि : कर्कट राशि हुनेहरुमा रहेको राहु-केतुको नराम्रो प्रभाव हटेर जाँदा जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सक्ला। धेरै समय देखि अड्किएका कार्यहरु फेरी शुरु हुनेछ भने आर्थिक लाभ पनि उल्लेख्य रुपमा प्राप्त हुन सक्ला। संग्रहित मनोकामना पनि पूरा हुनेछ। साथै स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुन सक्ला। सिंह राशि : जीवनकै सबै भन्दा ठूलो सफलता मिल्न सक्लने हुँदा सिंह राशि हुनेहरुलाई असिमित खुशी
गरिबी टाढा भगाउनको लागी सबैले सोचीरहेका हुन्छन् । तर धेरैले यो समस्याबाट पार पाउन सकिरहेका हुँदैनन् । ज्योतिष शास्त्रको ग्रंथ जातक पारिजात अनुसार यदि कसैको जन्म कुण्डलीमा बुध ग्रहको दोष छ वा अशुभ स्थितिमा छ भने मानिसहरुको बुद्धिसंग जोडिएको कामम बाधा आएको खण्डमा बुधवारको दिन बुद्धिका देवता गणेशजीको पनि बिशेष पुजा गरेर त्यो समस्याबाट पार पाउन खोज्ने प्रयास भने गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागी शिवजी मन्दिरमा गएर पार्वतीलाई शृंगारको सामाग्री चढाउनुस र गणेशजीको सपरिवारको पुजा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गणेशजीलाई १ किलो आधा गुद र धनिया मिसाएर भोग लगाउनुस र गरिबलाई दान गर्न सकिन्छ । गणेशजीलाई दुबोको २१ ओटा गाँठो चढाउनुस, यस्तो गर्नाले हरेक मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रही आएको छ । त्यस्तै बुध शान्तिको लागी तेस्रो लिंगीलाई हरियो चुरा दान गर्दै ऊँ श्री गणेशाय नमस् मन्त्रको १०८ चोटी दैनिक
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ः लिंगको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ । शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिंगको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिंगको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिंगको अर्थ नपुसंकको प्रतीक भन्ने हुन्छ । आखिर के हो त शिवलिंग ? शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिंग भनिएको हो । स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिंग हो भनिएको छ । शिवलिंग वातावरणसहित घुमिरहेको धर्ति तथा सारा अनन्त ब्रह्माण्डको अक्ष धुरी नै लिंग हो । शिवलिंगको अर्थ अनन्त हुन्छ । अर्थात यसको कुनै सुरुवात
विचार व्यक्त गर्नअघि एक पटक सोच्नुहोस् बोल्न वा विचार व्यक्त गर्नुअघि एक पटक चिन्तन गर्नुहोस्, ताकि तपाईको विचार गलत समयमा नपरोस् । यो एक सामान्य उपाय हो, हामी आफ्नो रवैयालाई परिवर्तन गरेमा जीवनमा धेरै कष्ट, समस्याको कामना गर्नु पर्दैन । आलोचनाबाट टाढा रहने र अर्कोलाई नउडाउने (सकारात्मकता) यदि तपाईमा माया, स्नेह, दया, करुणा वा कल्याण जस्ता सकारात्मक भावना बढी छन् भने जोसँगको सम्बन्ध सुमधुर र बलियो रहन्छ । तर, यसको विपरित रिस, राग, चिन्ता, आलोचना, गल्ती खोतल्ने बानी जस्ता नकारात्मक आचरण छन् भने सम्बन्ध मात्र होइन, तपाई आफैँ बिलाउनुहुन्छ । नकारात्मक भावनालाई कहिल्यै बढावा नदिऊ ताकि खुशी हुन कुनै बाहाना खोज्न नपरोस् । अरुको अलोचना गर्नुको सट्टा उसलाई प्रसंशा वा हौसला दिने बानीबासाल्नुपर्छ। आफ्नो कमजोरीलाई ध्यानमा राख्ने तपाई दुःखी वा रिसाउन सजिलै सक्नुहुन्छ भने यो तपाईको कमजोरी हो । र
यी हुन् रगतमा कोलेस्टेरोेल घटाउने खाना… सबैले जान्न पर्ने
१) शाकाहारी खाना प्रयोग गर्न सके सबै भन्दा उत्तम हुन्छ किनकी शाकाहारी खानामा कोलेस्टेरोलको मात्रा अति कम हुन्छ । २) अत्याधिक कोलेस्टेरोल र भएका खाद्य पदार्थहरू जस्तै मासु, कलेजो, मिर्गौला, अण्डाको भित्री पहेंलोभाग, दूध, घ्यू, मख्खन आदि अत्यन्त कम मात्रामा उपयोग गर्ने । चिल्लो पदार्थको प्रयोग आवश्यक पर्दा (सूर्यमुखी, मकै, भटमास, तोरी आदिको तेल) अथवा (बदाम, ओलिभ, Avocado आदिको तेल) प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।१) शाकाहारी खाना प्रयोग गर्न सके सबै भन्दा उत्तम हुन्छ किनकी शाकाहारी खानामा कोलेस्टेरोलको मात्रा अति कम हुन्छ । ३) माछा, कुखुरा र लौकाटको मासुमा कम बोसो हुने हुनाले यी चिजहरू कम मात्रामा उपभोग गर्न सकिन्छ । ४) खसी, बोका, भेडा, च्यांग्रा, बँदेंल, बंगूर आदिको मासुमा अत्याधिक हुने हुनाले यिनीहरूको उपभोग नगर्नु बेश हुन्छ । ५) खाना पकाउँदा तेल कम राख्ने । मासु पकाउँदा छाला र बोसो स
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)का अनुसार विश्वभर १० करोडभन्दा धेरै महिला गर्भनिरोधक चक्की (पिल्स) सेवन गर्छन । सन् १९६० को दशकमा गर्भनिरोधक पिल्सको सुरुवात भएदेखि नै यसको प्रयोग गर्दा हुने फरक फरक नकारात्मक प्रभाव (साइड इफेक्ट) देखिने गरेका छन् । केही समयअघि मात्र युरोपेली राष्ट्र डेनमार्कमा गरिएको एउटा अध्ययनले पिल्सको उपयोग गर्दा अवसाद (डिप्रेसन) हुने जोखिम बढ्छ ।डेनमार्कका अध्ययनकर्ताहरूले करिब १० लाख महिलाको मेडिकल रेकर्डको अध्ययन गरेका थिए । १५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ती महिलामा पिल्स खानुअघि डिप्रेसनका कुनै पनि लक्षण देखिएका थिएनन् । गर्भनिरोधक पिल्स खाने महिलाहरूले पछि डिप्रेसनको उपचारका लागि औषधि खानु परेको वा अस्पतालमै भर्ना हुनु परेको अध्ययनकर्ताहरूले पत्ता लगाएका थिए । यो अध्ययनलाई सञ्चारमाध्यममा ‘गर्भनिरोधक पिल्स खानुहुन्छ भने डिप्रेसनका लागि तयार हुनुहोस्’
बृद्ध भत्ता मासिक ५ हजार हुन्छ, सरकार मात्रै हाेइन अहिले प्रणाली फेरिएको छ’ : रक्षामन्त्री पोखरेल
भीमदत्तनगर । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आगामी वर्षको नयाँ बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइने बताउनुभएको छ । आइतबार कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाको चौथो नगरसभा तथा नवनिर्मित कार्यालय भवन उद्घाटन समारोहमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोख्ररेलले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता प्रतिव्यक्ति मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइने जानकारी दिनुभयो । फाइल फाेटाे ‘ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा समेत गरिएको छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षाभत्ता सरकारले घटाउँदै छ भनेर गलत प्रचारबाजी गरिएको छ ।’ उहाँले वर्तमान सरकार कानून र विशेष नीति निर्माणमा लागेको बताउँदै चालु वर्षमा समृद्धिको तस्बीर खडा गर्न सरकार लागि परेको धारणा राख्नु भयाे । ‘हिजोका दिनमा सरकार मात्रै फेरिन्थ्यो’, मन्त्री पोखरेलले थप्नुभयो, ‘अहिले प्रणाली फेरिएको छ ।’ उहाँले कृषि,
अभिनेत्री श्वेता खड्काको अस्पतालमा भर्ना, श्वेताको खड्काको अचानक शल्यक्रिया – दोश्रो जिबन पाए भन्दै लेखिन सुस्वास्थ्यको कामना
काठमाडौं , पछिल्लो समय समाज सेवा बाट अझ प्रिय बनेकी नायिका श्वेता खड्का अस्पताल भर्ना भएकी छन् ।स्वेताको गर्धनमा ट्युमर देखिपछि उनि अस्पताल भर्ना भएकी हुन् । गर्धन मा देखिएको ट्युमर को भारत मा सल्यक्रिया सफल गरिएको स्वेताले जानकारी दिएकी छन् । स्वेता फाउन्डेसन को पहल मा माझि बस्ति निर्माण को अन्तिम तयारीमा रहेकी स्वेता चलचित्र ‘हेल्लो जिन्दगी’ को सुटिङका लागि लन्डन पुगेकी थिइन् । लन्डन जानु भन्दा अगाडिनै चिउडो को मुनि भागमा दुखाइ भएको र डाक्टर संग परामर्स लिदा ट्युमर देखेको बताएकी छन् । अभिनेत्री खड्काले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सामाजिक सञ्जाल मार्फत भारतको दिल्लीमा शल्यक्रिया गरिएको जानकारी गराएकी हुन्।लण्डनमा चलचित्र छायाँकनको क्रममा असह्य पीडा भएपछि डाक्टरलाई देखाउँदा ट्युमर रहेको थाहा पाएपछि भारतको दिल्ली आएर द्रुत प्रक्रिया मार्फत शल्यक्रिया गरिएको उनले बताइन्।उनले
खुलामञ्चमा साना व्यापारीकाे साढे ५ करोडभन्दा बढी रकम डुब्याे
काठमाडौं । खुलामञ्चमा सटर खरिद गरेका साना व्यवसायीले ठेकेदार कम्पनीलाई बुझाएको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ बिल्डर्स प्रालिले आफूहरुलाई ठगेको व्यवसायीले बताए। खुलामञ्च कब्जा गरेर व्यापारिक सटर निर्माण गरेर प्रालिले साना व्यवसायीबाट करिब साढे पाँच करोड रुपैयाँभन्दा धेरै संकलन गरेको थियो। खुलामञ्चमा सटर खरिद गरेका नुवाकोटका सुजन तामाङले ८ लाख रुपैयाँ बुझाएको दावी गरे। खुलामञ्चमा सटर खरिद गरेकी मनमाया गुरुङले सटर खरिद गर्नका लागि ११ लाख रुपैयाँ बुझाएको बताइन्। स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ कामनपा २८ इकाइका अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेले साना व्यवसायीले ऋण काढेर तथा धितो राखेर सटर किनेको बताए। ‘कुनै कागजपत्र गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कसैले ऋण काढेर र कसैले बैंक तथा सहकारीबाट घर धितो राखेर लिएका हुन्। त्यसैले सरकारले तत्कालै आवश्यक कारवाही गरेर पैसा उठाइदिनुपर